स्वाभिमान लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १३ पुस २०७६)
कम्पनीले भदौमा लाभांश प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म साधारणसभा आह्वान गरेको छैन । कम्पनीको भदौ २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २४ प्रतिशत बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ १ दशमलव २७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । संस्थाले संख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक वृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्यको रूपमा अघि सारेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार रू. २३ दशमलव ५१ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको यो कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६ करोड १८ लाख ६१ हजार छ । सो अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. ३ करोड ८४ लाख ८२ हजार रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३६ लाख ३६ हजार खुद नाफा गरेको छ । निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ८१ रहेको कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा रू. ८४ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । बिहीवारको कारोबारमा कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. ८९५ कायम भएको छ ।
2019-12-29 - 347 view(s) - abhiyandaily